Tụnyere: Windows 7 DVD Onye kere & Wondershare DVD Creator
Kasị Windows 10 ọrụ nwere ike ugbua mara na ya abịa na a bara uru omume na-akpọ Windows DVD Onye kere. Ọ bụ a n'ezie ụdị bara uru ọkụ na ngwá ọrụ na-eme ka DVD. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ inwe n'ụlọ gị gị na videos ọkụ DVD enweghị edezi, ọ ga-abụ gị na mbụ nhọrọ. Otú ọ dị, ihe ọ bụrụ na ị ga-amasị dezie video na ọkụ DVD dị ka a ọkachamara? Ọfọn, m chere na isiokwu a ga-arụ ọrụ ajụjụ a si. Anyị na-aga na-eme ka a zuru tụnyere n'etiti Windows DVD Onye kere na a ọkachamara DVD ọkụ ngwá ọrụ - Wondershare DVD Creator si n'ebe.
1. akwado Video Formats
Windows DVD Onye kere: Ọ na-akwado video ọsọ ọsọ nke nke na-abịa site Microsoft onwe ya, formats dị ka WMV, ASF, mpg, wdg Ọzọkwa, ọ na-akwado na-agbakwunye foto nke ga-akpaghị aka na-abata ngosi mmịfe, nke bụ a ego karịa ndị ọzọ na DVD burner software. Lee bụ a zuru ezu ndepụta nke na-akwado formats nke Windows DVD Onye kere >>
Wondershare DVD Creator: Na ya ọkachamara atụmatụ, DVD Creator akwado fọrọ nke nta niile dị iche iche nke video formats, dị ka AVI, MP4, MPEG, 3GP, WMV, RM, MOV, RMVB, DAT na ọbụna HD video formats: MTS, M2TS, TS, HD MKV, HD WMV, na HD MOV. Na ihe ọtụtụ ndị nakweere na-eji nke HD video formats, ọrụ a ga-maa-abụ a pụta ìhè ka DVD Creator si uru. Wezụga ya, ọ na-akwado foto importing mere na ị pụrụ ime ka a foto ngosi mmịfe na ala. Lee akwado formats nke Wondershare DVD Onye kere >>
2. Video edezi Ọrụ
Ọrụ nke video edezi bụ ihe dị mkpa otu iji nweta a mma visual mmetụta.
Windows DVD Onye kere: Ọ na-adịghị akwado ụdị ọ bụla nke video edezi ọrụ.
Wondershare DVD Creator: Ezie ọkachamara DVD Creator enye ike video edezi ọrụ. Ka ihe atụ, akuku video faịlụ wepụ nwa onu, ewepụtụ video ogologo weghara mmasịrị gị, kpatụ ìhè, iche na saturation nke videos ka mma mmetụta, tinye watermark, wdg Nke a dị ike ọrụ nwere ike ịkọwa ewu ewu na nke DVD Creator.
Olee otú ị mepụtara omenala DVD menu ndebiri? Ọfọn, i nwere ike ime ọtụtụ ihe na DVD menu edezi ọrụ nyere site kasị DVD burner software.
Windows DVD Onye kere: The kasị ịtụnanya akụkụ nke Windows DVD Onye kere nke m iche ga-abụ 20+ animated menu ndebiri, nke ọtụtụ DVD burners adịghị nye. Ọzọkwa, ọ na-enye 10+ etiti ndebiri.
Wondershare DVD Creator: Site iche, ndị ọkachamara DVD Creator enye 40+ free static na ike DVD menu ndebiri. I nwekwara ike hazie DVD menus na ọkacha mmasị gị okpokolo agba, music, foto, buttons, wdg Ọ bụrụ na ị na-achọghị a DVD menu, ị nwere ike họrọ "Ọ dịghị NchNhr".
4. DVD-ere Ọkụ na mmepụta Option
Mmepụta nhọrọ pụtara ihe na-ajụ ma ọ bụ ebe i nwere ike ọkụ video ka. A na-emetụta mkpebi gị mgbe ndị mmadụ mkpa nwere ike ịdị iche iche.
Windows DVD Onye kere: Ọfọn, ọ na-akwado na-ere ọkụ video ka DVD diski naanị. Ya mere, ị mkpa ego gị PC iji jide n'aka na i nwere DVD ọkwọ ụgbọala dị.
Wondershare DVD Creator: Nke a bụkwa ebe ọkachamara DVD Creator shines. Ọ na-enye multiple nhọrọ, ị nwere ike ire video ka DVD diski, DVD na nchekwa ma ISO faịlụ. Ya mere ị pụrụ họrọ kpọmkwem na-ajụ na-esi gị video ọkụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị video ọkụ DVD enweghị emekpa, mgbe ahụ, Windows DVD Onye kere bụ maka gị. Ma mgbe ị chọrọ ka ndị ọzọ video edezi ọrụ ma na ị chọrọ ka ndị ọzọ video mmepụta nhọrọ, mgbe ahụ, ọkachamara DVD Creator bụ software na-agbalị.
Olileanya, ị ga-na-na-Mata mgbe amụta isiokwu a. Mgbe niile, ọ bụ ọnụ ahịa oge ịmụta ihe dị iche n'etiti Windows DVD Onye kere na ọkachamara DVD Creator. Ma ọ bụrụ na ị maara kpọmkwem ihe ị chọrọ, ị ga-eme mkpebi ziri ezi na oge.
Wondershare DVD Creator for Mac Bụkwa maka Mac ọrụ. Get nri DVD Creator na tọghata ọ bụla video, ọdịyo na foto DVD na ala.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ dị ike DVD Creator, ị nwere ike họrọ Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ nwere ike idozi niile video-metụtara nsogbu rụọ ọrụ nke ọma, dị ka ọkụ DVD, edezi, converting, nbudata, ndekọ, nkwanye, wdg.
Wondershare Video Ngwọta Comparison:
Olee otú Ọkụ a Picasa DVD ngosi mmịfe maka Ikiri na TV
> Resource> DVD> Windows DVD Onye kere VS Wondershare DVD Creator